Answering Islam - Oromo: Kitaabota
Ilaalcha Islaamummaan Waa’ee Jireenya fi Amantaatif Qabu
Ilaalchi Islaamummaan waa’ee walitti dhufeenya jireenya fi amantaatif qabu ilaalchota hawaasota biroo irraa baay’ee addadha. Hawaasota Islaama hin taane keessatti jireenya jechuun “amantaa” bira darbee wantoota heddu of keessatti hammata. Dabalataanis amantaa filanne hordofuuf walabummaan qabnu kan kabajamee fi seeranis kan deeggaramuudha.
Jireenya fi Amantaa Islaamummaa keessatti
Yaadni “filannoo” jedhu mataan isaa Islaamummaadhan kan balaaleffame ta’uu bira darbee akka yaada farra Islaamummaatti lakkaawwama. Walabummaan filannoo kan hin jirre ta’uu bira darbee amantaan kan dhuunfatii miti.
Islaamummaa keessatti jireenyi fi amantaan walitti hidhata cimaa kan qabanii fi kan adda hin baanedha. Musliimni tokko amantaa isaa gara amantaa biraatti yoo jijjiire seera Islaamummaatin yakka du’aan isa adabsiisu ta’a.
Kutaan Musliimonni yeroo waa’en walabummaa amantaa ka’e hunda caqasan inni “amantaatti nama dirqisiisun hin jiru” (Suuraa 2:256) jedhu akka barbaachisaa ta’ettii jal’ifamuudhan ni hiikama. Kunii fi kutaalen jalqaba irratti Muhaammadiin dubbataman isaan laafoo ta’an haqamuudhan mul’atoota haarawaan bakka bu’anii jiru. Kunis akka seera tumtoota Islaamummaati fi hiiktota qur’aanaa beekkamoo ta’aniin dubbatamuttidha. (Kan haqame yemmuu ta’u irra deddeebidhaan maalif akka caqafamu beekuu yoo feetan kutaa waa’ee taqiyyaa dubbatu ilaalaa).
Filannoo amantaa irratti dirqisiisun erga hin jiraannee seerri Sa’uudii Arabiyaa Musliimni biyyattii keessa jiraatu amantaa isaa yoo jijjiire akka du’aan adabamu kan murteessuf maalifi? Lammii Afgaanistaan kan ta’ee fi amantaa isaa gara Kiristiyaanummaatti kan jijjiirrate Abdul Rahmaan duuti itti murtaa’ee mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiru maalifi? Mahdii Jibaad amantaa isaa gara Kiristiyaanummaatti waan jijjiiref bakka bu’oota mootummaa Iraanin kan ajjeeffameef maalifi? Abbootin angoo Iraan namoota amantaa isaanii gara Bahaa’ii jijjiirratan kan ari’ataniif maalifi?
Addunyaa Islaamaa kam keessattuu namni tokko amantaa isaa ifaan jijjiirrachuu isaa yoo beeksise adda foo’amuu, abbootii seeratiin dararamuu, hidhamuu fi kana bira darbees murtiin du’aa isa ni eeggata.
Namni tokkoo eenyullee mufachiisudhaaf osoo hin yaadin “raajichi Islaamummaa Muhaammad nama qulqulluu hin turre” yookin “Islaamummaan amantaa dhumaatii miti” jedhee yoo dubbate biyya Islaamaa kam keessattuu akka gantuu fi nama Waaqayyo arrabseetti lakkaawwama. Fakkeenyaf seerri akkasii seera adabbii yakkaa Paakistaan lakk. 295 A, B fi D irratti akka himametti hidhaa waggaa kudhanii irraa eegalee hamma umrii guututti yookin immoo du’aan ni adabsiisa.
Kutaalen qur’aanaa armaan gadii fakkaatan “amantaatti nama dirqisiisun hin jiru” isa jedhu kan irra deddeebidhaan dubbatamu sana haqanii jiru:
Suuraa 9:5, 11 “Yeroo ji’oonni kabajaman raawwatanitti mushrikoota (namoota waaqolii biroo waaqa dhugaa waliin waaqeffatan) eddoo argattanitti ajjeesaa. Qabaa, itti marsaa, isaan eeggachuudhafis karaa irra riphaa. Yoo qalbii jijjiirratan, salaatas seera isaa eeganii yoo sagadan, kennaa arjoomaa dirqiitis yoo kennan karaa isaanif gadi dhiisaa. Allaahn dhiifama kan godhuu fi gara laafessa.”
Suuraa 8:38-39 “Namoota hin amannetti akkas jedhii itti himi, amanuu dhiisuu irraa kan deebi’an yoo ta’an inni darbe dhiifama ni godhamaaf. Haata’u malee kan didan yoo ta’an adabbiin warra isaan duraa irra gahe akeekkachiisa isaanif ni ta’a. Badiin tokkollee hamma hin jirree fi amantaan hundinuu kan Allaah hamma ta’utti isaanin lolaa isaanis ajjeesaa.”
Dabalataanis seera baastonni Islaamumma fi shari’aan dubbii “amantaatti nama dirqisiisun hin jiru” jedhu kana kan hiikan Araboonni, Yihuudonni, Kiristiyaanonni akkasumas warri amantaa hin qabne walabummaa gara Islaamummaa dhufuu akka waan qabaniitti malee amantaa isaanii islaamummaa irraa gara biraa jijjiiruu akka danda’anittii miti. Walabummaa kennee jira kan jedhamu yoo ta’e walabummaan inni kenne karaa tokkoon qofadha. Yeroo ammaa kana dursitoonni Islaamaa Addunyaa Dhihaa keessatti argaman Musliimni kamiyyuu amantaa isaa Islaamummaa irra gara birootitti yoo jijjiire akka hin ajjeefamne labsanii jiru haata’u malee kana kan raawwataniif sab qunnamtii qofaaf ta’uu ni danda’a. Dhugumaan onnee isaanii irraa osoo ta’ee fatwaa (labsii seera Islaamaa) isa sirrii ta’e baasudhaan hojii irra akka oolu dhaabbilee isaanii kan akka organization of Islamic Conference, The Muslim World League, The Union of Islamic Ulama, Al Azhar University fi kkf gaafachuu qabu turan.
Fakkiiwwan armaan gadii sirritti qalbeeffachuun ilaalaa. Fakkiin 1 kan mul’isu namoota Islaama hin hordofne biratti amantaan kutaa jireenya gahee murtaa’aa qabu qofa akka ta’eedha.
Fakkii 1. Addunyaa Islaama hin taane keessaatti walitti dhufeenya amantaa fi jireenyaa
Rog afreen inni duraa jireenya yemmuu jedhamu amantaan kutaa jireenyaa xinnaa ta’ee mul’ata. Kana jechuunis namni tokko hammuma fedhe amantaa isaatif kan inaafu yoo ta’eyyuu eessattii fi yoom waaqeffannaa gaggeessuu akka qabu, kadhannaa dhuunfaa isaa yoom gochuu akka qabu, fuula isaa garam garagalchee kadhachuu akka qabu, nyaata nyaatu, eenyu waliin michoomuu akka qabuu fi kkf walabummaa guutudhaan kan murteessu isa jechuudha.
Amma immoo Fakkii 2 xiinxalaatii wal madaalchisaa. Ilaalchi amantaa rektaangilicha kan guute yemmuu ta’u jireenyi immoo kutaa ishee xinnoodha. Akka ilaalcha Islaamummaatti amantaan wanta hundaa ni ta’a jechuudha. Seera qulqullummaa dhuunfaa eeguu irraa eegalee hamma wantoota gurguddoo hawaasa keessatti raawwatamaniitti kan argannu amantaa irraati.
Fakkii 2: walitti dhufeenya amantaa fi jireenyaa Islaamummaa keessatti
Islaamummaan akka namoonni Dhihaa yaadan sanatti amantaa qofa ta’ee kan lakaa’amuu miti. Garuu wanta hundaa kan of keessatti hammateedha. Irra caala hawaasummaa-siyaasaa fi hawaasummaa-amantaadha. Innis hawaasummaa-diinagdee, hawaasummaa-barnootaa, seera tumuu fi seera kabachiisuu yemmuu ta’u jechoota amantaatin kan golgameedha. Kutaa jireenyaa hordoftoota isaa hundumaa, walitti dhufeenya waliin qabanii fi walitti dhufeenya namoota Musliima hin taane waliin qaban hunda kan too’atuudha.
Jireenya hawaasa Musliima fi kutaa jireenya isaanii kamuu too’achuu keessatti shoora ol anaa kan taphatu Masgiida.
Eddoo waaqeffannaa ilaalchisee Islaamummaa fi amantaalen biroo (fakkeenyaf Kiristiyaanota, yihuudota, warra amantaa Hinduu hordofan, kkf) jechi isaan fayyadaman kan wal fakkaatu yemmuu ta’u yaad rimee fi hiikni isaanii karaa qabatamaa ta’een garaagarummaa ni qaba. Jecha biraatin yaadolii Islaamaa, bu’uura amantichaa fi dhaabbilee isaa kanneen amantaalee biroo keessatti argaman waliin wal fakkeessun yookin tokko godhanii lakkaa’un nu hin barbaachisu. Akkas gochuun dogongora balaa fiduu fi kan bitaa nama galchu ta’a.
Qabiyyeewwan Gurguddoo Lameen
Islaamummaan walumaa galatti qabiyyeewwan gurguddoo lama irratti kan hundaa’edha:-
1. Qur’aana :- kitaaba Allaah biraa gara Muhaammad karaa ergamaa Gabri’eelitiin waggoota 23 keessatti suuta suutan akka bu’e himamuudha.
2. Sunnaa:- qixuma qur’aanaa yookin immoo isa caalaa barbaachisaa akka ta’e kan amanamu yemmuu ta’u fakkeenyiwwan Muhaammad kan keessatti sassaabbamaniidha. Wantoota Muhaammad jechaa fi hojiidhan barsiise akkasumas akka godhan wantoota isaan ajaje hunda of keessaa qaba. Sunnaan yookin fakkeenyi raajicha Muhaammad kuni Islaamummaadhaf bakka bu’aa kan hin qabneedha. Sunnaan osoo jiraachuu baatee barmaanni yookin amantiin Islaamummaa kamiyyuu sirritti hubatamuu hin danda’uu. Qur’aanniyyuu hubatamuu hin danda’u.
Uummata Musliimatiif Muhaammad ol aana fi kabajaa guddaadhan akka fakkeenyatti kan ilaalan waan ta’eef isa fakkaachu fi akka barsiisa qur’aanatiin isaaf ajajamuu isaan barbaachisa.
Suuraa 68:4; “Ati (yaa Muhaammad) amala gaarii cimaa irra jirta.”
Suuraa 53:2-5; “Raajin keessan Muhaammad hin dogongorre, hin jal’annes. Ofuma isaa irraa kaases hin dubbanne. Inni dubbiin isaa mul’ata gadi bu’u malee kan biraatii miti. Ergamaa humni isaa cimaa ta’etu isa barsiise.”
Suuraa 33:21; “isin warra Allaah fi guyyaa isa dhumaa barbaaddaniif Alaahdhaafis warra ulfna baay’istanii kennitaniif ergamaa Alaah keessatti fakkeenya gaarii ni argattu.”
Suuraa 4:80; “Namni ergamtichaaf ajajame dhugumaan Allaahdhaaf ajajame. Namni ajaja irraa dheeffes (akka si hin yaadchisne). Isa akka eegduf nuti si hin ergineetii.”
Suuraa 48:8-10; “Nuti ragaa nama ba’u, oduu gaarii nama himuu fi sosodaachisaa goonee si erg9inee jirra. Ergamtichatti (akka amantan), akka isa gargaartan, akka isa kabajjan, (Allaah) ganamaa fi galgala akka faarsitan (isa ergine). Namoonni si waliin waadaa galan Allaah waliin waadaa galan. Harki (humni) Allaah harka isaanitii olidha.Namni waadaa diiges kan diige lubbuu isaa qofa irratti.”
Suuraa 59:7; “Allahn qabeenya namoota magaalotaa keessaa isa gara ergamaa isaatti deebise isin keessaa namoota abbootii qabeenyaa ta’an gidduutti akka hin deddeebine. Allaah fi ergamaa isaatif, firoota isaatif, ijoollee abbaa hin qabneef, hiyyeeyyotaaf, warra karaa adeemaniif (kan kennamuudha).”
Kanaafuu wanta kamiyyuu karaa Islaamummaatin yoo ilaallu kan hubannu abbootin seeraa bu’uurawwan lameen kana irratti hundaa’udhaan kan dubbatanii fi masgiidan kan tamsa’an ta’uu isaaniti.
Ajajoonni bu’uuraa Islaamummaa kan maddanii fi kan tamsa’an Masgiidota keessayi. Bu’uurri angoo isaanii immoo qur’aana fi sunnaa ta’uu isaanii barreeffamni armaan olii sirritti ni hubachiisa.
Islaamummaan hordoftoota isaa too’annaa cimaa jala kan oolchu akka ta’e beekkamus dhugaa amantichaa irraa akka hubannutti wanta amantaa bira darbe ta’uu isaa irraa kan ka’e guutumaan guututti amantaa qofa akka ta’e dubbachuun rakkisaadha.
Ilmi namaa hundi gaafii bu’uuraa kan ta’ee fi dagachuu kan hin dandeenye ni qaba. Amantaan waaqa biraa dhufe tokko immoo gaaffii guddaa ilama namaa ilaalchisee deebii qabaachuu qaba. Gaafin ilmaan namaa kuni jireenya bara baraa waliin kan wal qabateedha. Ba’aan qopheessitoota fuula kanaa lubbuun Musliimotaa gara fayyisaa isa dhugaa Ilma Waaqayyoo Iyesus Kiristoos akka deebituu fi jireenya bara baraa akka argattu gargaarudha.
Kaayyon kabajamaa ta’e kun akkamitti galma gahuu danda’a? kuni galma gahuu kan danda’u Macaafa qulqulluu garaa qulqulluudhan dubbisuu fi dhugaa Waaqayyoo barbaadudhaaf onnee qopheessanii cubbuu irraa qalbii jijjiirratanii amantiidhan gara Waaqayyoo karaa Iyesus Kiristoosin dhihaatanii dhiifama gaafachuudhani. Waaqayyo isin yaa gargaaru.
Barreessitoonni: Beelshaazaari fi Abdineegoo
Arabiffaan inni “Masjid” jedhamee beekkamu jechi kun hundeen isaa Sajiida yookin Suju kan jedhu yemmuu ta’u hiikni isaa waaqeffannaa jechuu akka ta’e yoo yaadneyyuu hiikni isaa inni sirriin garuu “huurudhaan (afaanif funyaanin) gadi kufuu” jechuudha. Islaamummaa keessatti waaqeffannaan seera Allaah isa ifa ta’e (Shari’aa) jabeessanii qabuu fi hojii irra oolchudha.
Islaamummaa keessatti yaad-rimeen walitti dhufeenya namaa fi Allaah gidduutti adeemsifamu gonkumaa hin jiru. Barsiisni Macaafa Qulqulluu inni Waaqayyo akka Abbaa keenya ta’e dubbattu Islaamummaa keessatti gonkumaa hin argamu. Waaqayyo nutti dhihoo akka ta’u kan godhe barsiisni Macaafa Qulqulluu Kiristoos akka nuuf du’e dubbatu sunillee hin argamu.
Barsiisni Macaafa Qulqulluu namoonni fakkii Waaqayyootin akka uummaman dubbatu Musliimota biratti kan balaaleffamuu fi akka Waaqayyoon ganuutti kan lakkaa’amuudha. Kanaafuu jaalalli Waaqayyoo inni Kiristiyaanonni itti gammadan Islaamummaa keessatti gonkumaa hin beekkamu. Islaamummaa keessaatti kaayyon waaqeffannaa garbichi gooftaa isaatif mataa ofii isaa gocha itti dabarsee kennu mul’isuuf kan ooludha. Sahri’aan yookin seerri Allaah ifa ta’e namoonni fedha isaanitiin kan hojii irra oolchan ta’us ta’udhabaatus kan filannoodhaf dhihaatu osoo hin ta’in humnaan kan hojii irra ooludha. Kun ta’uu yoo dhiise jihaadni barbaachisaa ta’ee ni argama jechuudha.
Masgiida Akka Eddoo Walga’iitti (Arabiffaan Jama’aa)
Jechi yeroo bay’ee Masgiida waamudhaaf oolu Arabiffaan jecha jama’aa jedhu yemmuu ta’u hundeen jecha kanaatis walitti qabamuu yookin walga’uu hiika jedhu qaba. Masgiidni hawaasa Musliimatiif akkaataa seera islaamummaa ifa ta’een gahee wiirtuu aangoo kan taphatuu fi amantaa irrattis ta’ee dirqamawwan gara garaatif labsii baasuf eddoo oolu waan ta’eef akkasumas haala qabatamaa jiru waliin walitti dhufeenya qaban ilaalchisee eddoo qajeelcha itti argatan waan ta’eef eddoo isaan itti walgahaniidha.
Akaakuwwan Masgiidotaa Gara Garaa
Masgiidonni hunduu sadarkaa wal qixa ta’e hin qaban. Garaagarummaawwan kunneen sababa barsiisa amantaatin, jechuunis, garaagarummaa Shi’aa fi Sunnii gidduu jiruun yookin immoo garaagarummaa Suufi fi Salafii gidduu jiruun kan uummamee miti. Garee Islaamummaa tokko ta’e keessattiyyuu Masgiidonni barbaachisummaa isaanitiin garaagarummaa ni qabu.
Garaagarummaan kun kan uummamee yeroo Muhaammad “kadhannaan Masgiida biroo keessatti si’a kuma dhibba tokko taasifamu kadhannaa Masgiiga Makkaa (Ka’abaa) keessatti si’a tokko taasifamu waliin walqixa” jedhee itti dubbatetti. Itti fufiinsanis kadhannaan si’a kuma tokko eddoo biraatti taasifamu kadhannaa si’a tokko masgiida isaa kan magaalaa Madiinaa keessatti argamu waliin walqixa akka ta’ee fi kadhannaan si’a dhibba shan Masgiida biroo keessatti taasifamu kadhannaa si’a tokko Masgiida Al Aqsaa Yerusaalem keessatti argamu keessatti taasifamu waliin walqixa akka ta’e dubbatee jira.
Sababa armaan olitti ibsamee fi sababoota walxaxoo ta’an kan biroo irraa kan ka’e Musliimonni faayidaalee seenaa isaani fi kaka’umsa adda ta’een Masgiidota isaanii gulantaalee gara garaatti qoodanii jiru. Kanarraa kan ka’e Masgiidonni lama magaalaa Kaayiroo keessatti xinnoo addaan fagaatanii kan argaaman ta’anis faayidaa amantaadhaf kennan irraa ka’uudhan wal ni caalu jechuudha. Kadhannaan Misr Al Gadiidatti kadhatamu kadhannaa Amiir Ibn Alaas keessatti kadhatamu irra ni xinnaata. Daandiwwan lama ce’ee isa argamu irra Masgiidni Sa’id Zaynab nicaala.
Masgiidni tokko barbaachisaa ta’ee lakkaa’amuudhaf umrii dheeraa qabaachun isa irraa hin eeggamu. Barbaachisummaan isaa kan madaallamu sababoota siyaasa fi amantaa gara garaa irraa ka’uudhan akkasumas barsiisa, lallabaa fi maal akka of keessaa qabu akkasumas eenyu akka ijaare wantoota jedhan irratti hundaa’udhaani. Fakkeenyaf Jama’aat Tabliighii Dhaabni jedhamu wiirtuu isaa gara Landan, Paaris yookin immoo garuma eessatuu yoo jijjiire Masgiidni sun barbaachisumaan karaa amantaa fi siyaasaa uummata Islaamaa gidduutti qabu ni dabala. Kunis ta’uu kan danda’e hundeessitoonni fi miseensonni dhaabichaa Mankaraarsummaa Islaamaa jaarraa 7ffaa jabeessanii waan qabanii fi kanarratti hundaa’uniis misiyoonota leenjisaa waan turaniifidha.
Jama’aat Tabliighin hawaasa Musliimaa keessatti kabajaa fi ulfina argachuu sababni danda’eef kaka’umsa Islaamummaa sadarkaa Addunyaa irratti taasifameef gaheen inni taphate ol’aanaa waan ta’eefi.
Hojii fi Gahee Masgiidotaa
Masgiidonni hunduu ajaja Muhaammadiin Masgiida yeroo jalqabaatif Madiinaa keessatti ijaarrame fakkeenya godhachuudhan kan ijaarramaniidha. Masgiidni inni duraa hawaasa Musliimaa gidduutti gahee inni taphachaa ture osoo hin barin hojiilen Masgiidaa maal akka ta’an baruun rakkisaadha.
Muhaammad adeemsa baqannaa Makkaa irraa gara Madiinaa isa Hijiraa jedhamee beekkamuu fi Islaamummaa keessatti faayidaa hafuura fi siyaasaa guddaa isa qabu yemmuu taasisetti jiraattota Madiinaa keessaa baay’onni isaanii Musliima hin turre. Yihuudonni baay’en, Araboonni amantaa isaanii jijjiirratan, Kiristiyaanonni akkasumas warri amantaa hin qabne Magaalaa Madiinaa keessa jiraachaa turan.
Barbaachisummaan isaa hammam guddaa akka ta’e mul’isuudhaf Muhaammad akkuma Madiinaa gaheen mana isaayyuu osoo hin ijaarin dura Masgiida ijaare.
Seerri Shari’aa madiinaa keessatti yemmuu hojii irra ooletti Masgiidni iddoo barnoonni amantaa itti kennamuun alatti eddoo wantoonni biroo heddu itti adeemsifamu ta’uun isaa ifa ta’e.
1. Mana barnoota Islaamummaa (madrasaa) barsiisni bu’uuraa Islaamummaa itti kennamuu fi gargaartonni Muhaammad jala ta’anii eddoo itti baratan ture.
2. Ajajniwwan hafuuraa eddoo itti darbuu fi dhiibbaa Islaamawaa hin taane jihaadan balaaleffachuudhaf dubbiilen jajjabeessuu eddoo itti kennamu ta’ee tajaajila ture.
3. Bara Muhaammadis ta’ee erga inni du’ee booda hordoftoota isaatin duulonni jihaadaa kan itti labsamanii fi mariidhaf kan itti dhihaatan akkasumas tooftaan kan itti bahuu fi ajajdoonni waraanaa eddoon itti ramadaman Masgiida keessatti ture.
4. Muhaammadiinis ta’ee duuka bu’oota isaatin bakka bu’oonni Islaamaa eddoon itti muudamanii fi ergama fudhatan Masgiida ture.
5. Bakka bu’oonni gosootaa eddoo itti muudaman ture.
6. Gosoonni Arabaa Muhaammadii fi Islaamummaadhaf eddoon itti waadaa galan bakkuma kana ture.
7. Dhimmoonni bulchiinsa Islaamummaa eddoo itti raawwatamanii fi yeroo sanatti wiirtuu mootummaa Islaamaa akkasumas Masgiida ta’ee tajaajila ture.
8. Jihaadni kan labsamuu fi loltoonni Musliimaa addunyaa injifatanii qabachuudhaf kan bobba’an Masgiida keessaa ture.
9. Gargaartonni Muhaammad hojiilee hojjetaniif beekkamtii kan argatanii fi diinota Islaamaa barbadeessudhaaf akkasumas mormiilee cal’isiisudhaaf eddoon itti jajjabeeffaman achuma ture.
10. Muhaammad akkasumas namoonni eddoo isaa bu’an kan akka Abu Bakr, Umar, Usmaan akkasumas Aliin bulchiinsota gara garaatif abbootii seeraa, raayyaa isaanitiif ajajdoota kan itti muudanii fi raayyan jihaadaf qophaa’e gara duulaa kan itti bobba’u akkasumas abbootin angoo gurguddooni fi namoonni qaraxa sassaaban kan ergaman Masgiida keessaa ture.
11. Walii galteewwan gara garaa kan hayyama argatan eddoo kanaa ture.
12. Shari’aan Islaamaa kan labsamuu fi hiiku fi hidhuun, hayyamuu fi dhoorkun kan labsamu Masgiida keessatti.
13. Edduma kanatti ol’aantummaan Musliimotaa fi gad’aantummaan namoota Musliima hin taanee ni labsama.
14. Dhiironni dubartoota irratti ol’aantummaa akka qabanii fi namoonni wal qixa akka hin taane itti labsama.
15. Hunda caalaa kan nama gaddisiisu namoonni Muhaammad gaddisiisan yookin immoo namoonni isa haala gaaridhaan hin dubbisne murtiin du’aa kan itti murtaa’u fi loltoonni inaaftota ta’an adabbii sana hojii irra oolchudhaaf eddoon isaan keessaa bobba’an Masgiidadha.
16. Yakkitoonni diinota Muhaammad barbadeessan raajicha isaanitiin eddoon itti ulfina argatanii fi itti leellisaman Masgiida keessattidha. Kanneen armaan gadiitis fakkeenyota haala kana mul’isaniidha.
A. Asmaa Bint Marwaan daa’ima ishee osuma hoosisaa jirtuu Umayer Bin Al Khatem nama jedhamuun haala sukanneessadhaan kan ajjeeffamte
B. Suufiyaan Bin Kaalid Abdallaa Bin Anis kan ajjeese
C. Namni Yihuudii Abu Afaaq jedhamu Salem Bin Amayeriin kan ajjeeffame
D. Abdallaa Bin Atiiq namni jedhamu nama Yihudii Ibn Abi Haqiiq kan ajjeese
E. Alii Ibn Xaalib nama Nader Ibn Hariit Jedhamu kan ajjeese
17. Dhuma irrattis raayyan loltoota Islaamaa haleellaa geessisuu fi bifa addunyaa jijjiirudhaaf kan Socho’an Masgiida keessaa ture.
Masgiidota Baraa fi Gahee Isaanii
Musliimonni martinuu Muhaammadiif ajajamuu fi dubbii fi hojiidhan isa fakkaachun dirqama isaan irraa eeggamuudha.
Muhaammad tajaajilaan waggoota dabarse digdamii sadeen keessaa kudha sadi’i kan dabarse Makkaa keessatti ture. Waggoota kudha sadeen kanneen keessatti Masgiidni kan hin ijaarramne yoo ta’u gahee Masgiidonni taphatan gonkumaa hin dubbanne.
Kutaa Qur’aanaa isa Makkaa keessatti waa’en kadhannaa kan ka’e yemmuu ta’u kadhannaan Islaamaa har’a Makkaa keessatti beekkamu yeroo sanatti hin beekkamu ture. Kuni hundi kan dhufe kutaa Madiinaa keessattidha.
Haalli kun gaafilee akka gaafannu nu dirqisiisa. Waggootii kudha sadeen jalqabaa seenaa Islaamummaa keessatti Hawaasni Musliimaa kadhachaa kan ture eessattii fi akkamitti ture?
Musliimonni Islaamummaan yeroo Makkaatti jalqabametti waa’ee Masgiida turee homaa hin beekan. Kan beekan yoo ta’es haalichi iccitii guddaa waan ta’eef wanti isaan beekan xinnoo qofa ta’a.
Beektonni Musliimaa sababa Masgiidni hin turreef ibsuuf yemmuu yaalanitti Kaa’abaan Masgiida akka ture, yeroo sanatti garuu Araboota amantaa hin qabneen too’atamaa waan tureef Muhaammadii fi duuka bu’oonni isaa eddoon sun hamma waaqolii tolfamoo irraa qulqullaa’utti irratti kadhachuu akka hin dandeenye ni dubbatu. Yeroo sanatti warroota amantaa hin qabne sana bituudhaf humna siyaasaa yookin loltummaa hin qabu ture. Kanaafuu ilaalcha isaanitiin mul’anni Muhaammad Madiinaa keessatti argate, Masgiida jalqabaa ijaarun isaa, humna loltummaatin angoo siyaasaa argachuun isaa akkasumas Makkaa too’annoo jala oolchun isaa duraa duuban dhufuun isaanii dirqama ture.
Masgiidni jalqabaa Madiinatti ijaarrame waajjira siyaasaa isa jalqabaa ta’uun isaa beekkamaadha. Tajaajilli isaatis bifa lama kan qabu yemmuu ta’u innis kan hawaasummaa-amantaa fi hawaasummaa-siyaasaa ture.
Bu’uura Muhaammad yeroo Masgiida jalqabaa ijaare kaa’e irraa kan ka’e Masgiidonni baraa fakkeenya Masgiida jalqabaa isa Madiinatti ijaarramee hordofuu qabu.